romantic boy's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
Blog PostsDiscussions (2)EventsGroups romantic boy's Likes romantic boy's Discussions
ကျွန်တော့် laptop က Wifi တစ်ခုက လွဲ ပြီး ကျန်တာကို access မဖြစ်လို့ ကူညီကြပါအုံးးးး
ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာက ဒီသင်တန်းကပဲ Window တင်ပေးထားတာ........ Wifi ဆိုရင်လည်း ဒီသင်တန်းက Wifi ကလွဲ ပြီး တခြား ဟာတွေကို လက်မခံဘူးဖြစ်နေလို့ပါ။ အဲဒါ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့…ContinueTags: ကူညီကြပါအုံး Started this discussion. Last reply by romantic boy Mar 30, 2012. View All
romantic boy has not received any gifts yet
romantic boy's Page
romantic boy replied to romantic boy's discussion ကျွန်တော့် laptop က Wifi တစ်ခုက လွဲ ပြီး ကျန်တာကို access မဖြစ်လို့ ကူညီကြပါအုံးးးး"Thank you, thanksalot, but the continuing problem is Window XP. I have only Window XP. Please........ "Mar 30, 2012မျိုးမင်း replied to romantic boy's discussion ကျွန်တော့် laptop က Wifi တစ်ခုက လွဲ ပြီး ကျန်တာကို access မဖြစ်လို့ ကူညီကြပါအုံးးးး"uninstall လုပ်ပြီးစမ်းကြည်.ပြိးပြီလား............properties ထဲမှာလည်းဝင်ပြင်လို.ရတယ်
"Mar 29, 2012romantic boy postedadiscussionကျွန်တော့် laptop က Wifi တစ်ခုက လွဲ ပြီး ကျန်တာကို access မဖြစ်လို့ ကူညီကြပါအုံးးးးကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာက ဒီသင်တန်းကပဲ Window တင်ပေးထားတာ........ Wifi ဆိုရင်လည်း ဒီသင်တန်းက Wifi ကလွဲ ပြီး တခြား ဟာတွေကို လက်မခံဘူးဖြစ်နေလို့ပါ။ အဲဒါ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ကူညီကြပါအုံးဗျာ.......ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...See MoreMar 29, 2012 3
romantic boy is nowamember of MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT ProfessionalsMar 11, 2012 Welcome Them! RSS